ArakanIDP – ULA
Nobody can love Arakan but Arakanese themselves.
Please help Arakan-IDPs!
Indiscriminate attacks of the Myanmar armed forces on civilian populations and the deliberate destruction of villages, food and other materials needed for survival have forced many men, women and children of local residents in Paletwa Township to abandon their homes and flee the atrocities and aggression of the Myanmar army. In the rush to reach the safe haven protected by the United League of Arakan (ULA), they have had to leave everything they own behind. With scarce food, water, cloth and shelter, the already harsh conditions are becoming unbearable.
The ULA is working around the clock to help and care for everyone affected by the recent fighting. Families are suffering inatemporary IDP camp under the protection of the ULA, and we must be there to support them all. Holding the principles of humanity, the dictates of public conscience and humanitarian grounds, we must be ready to show our solidarity for these internally displaced persons.
With your help, the ULA can continue delivering life-saving aid. Please makeadonation today to the victims of civil war conflict in Arakan (Rakhine).
Please contact the persons listed and the numbers below if you have questions regarding ArakanIDP Emergency Aid. Thank you.
(1) Khaing Thukha (India) ‪+91 9862793475‬
(2) Ko Khaing Min (USA) ‪+15156643924‬
Ko Tun Tin Win (USA) ‪+18043859875‬
(3) Ko Ngwe Soe (China) ‪+8613099633204‬
‪ +86133 24970527‬
(4) Ko Aung Sein Hla (Myanmar) ‪09422291752‬
(5) Ko Kaung Mrat (Thailand) ‪+66992956402‬.
(6) Ko Aung Lurnn (Singapore) ‪+65 82698664‬
(7) Ko Than Tun (Norway) + 47 98028362‬.
(8) Ko Tun Mra Khaing (Japan) ‪+819066401334‬
(9) Ko Khaing Min (Malaysia) ‪+60166338713‬
(10) Ko Kyaw Swar (Malaysia) ‪+60104294628‬
(11) Ko Nyi Nyi Htwe (Netherlands) + 31 43 3112048
ရန်သူ့ဖက်မှ လက်နက်ကြီးများဖြင့် တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီး လက်နက်ကြီး ကျည်အချို့မှာ ရွာများအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း၎င်းရွာနှင့် အခြားရွာအချို့မှ ရွာသူ/ရွာသားများကို ရက္ခိုင်အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (United League of Arakan –ULA) မှ ကူညီစောင့်ရှောက်ထား ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ စစ်ပွဲရှောင် အရေအတွက် (၆၀၀) နီးပါးခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ မိမိတို့ ULA အနေဖြင့်လည်း စစ်ပွဲရှောင်သူများအတွက် လိုအပ်သည့် အကူအညီ၊စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးကူညီစောင့်ရှောက်မှုများကို အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြင့် ကူညီစောင့်ရှောက်ထားလျှက်ရှိသည်။
စစ်ပွဲရှောင်များအတွက် လိုအပ်သည့်အကူအညီများကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ကူညီလှုဒါန်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းဖုန်းနံပများမှာ လတ်တလော စစ်ပွဲရှောင်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး အခြား အင်တာဗျူးများ၊ စစ်ရေးကဏ္ဍများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးအနေဖြင့် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ် မှာ ခိုင်သုခ တစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁)ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။
(၁) ခိုင်သုခ (အိန္ဒိယ) ‪+91 9862793475‬
(၂) ကိုခိုင်မင်း (အမေရိကန် ) ‪+15156643924‬
ကိုထွန်းတင်ဝင်း (အမေရိကန်) ‪+18043859875‬
(၃) ကိုငွေစိုး (တရုတ်) ‪+8613099633204‬
(၅)ကိုကောင်းမြတ် ( ထိုင်း) ‪+66992956402‬.
(၆) ကိုအောင်လင်း (စင်္ကာပူ) ‪+65 82698664‬
(၇)ကိုသန်းထွန်း (နော်ဝေ)‪+ 47 98028362‬.
(၈) ကိုထွန်းမြခိုင် (ဂျပန်) ‪+819066401334‬
(၉)ကိုခိုင်မင်း (မလေးရှား) ‪+60166338713‬
(၁၀) ကိုကျော်ဇော (မလေးရှား) ‪+60104294628‬
ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ် လိပ်စာ